Dobon'ny ranon'orana ny faritra sasany eto Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Antsirabe (La ville d’eaux)
Mitondra orana ilay andro ratsy vao niforona any amin’ny lakan-dranon’i Mozambika. Niampy indray ny rano be nentin’i CHEDZA, rivo-doza farany teo iny izay nandravarava tokoa teto afovoan-tany. Mbola eo an-dalam-panarenana ny simba manko ny olona amin’izao fotoana izao toy ny trano fivavahana sy ny sekoly ary ny andrin-jiron’ny JIRAMA, saingy manampy trotraka ny orana misesy ka mety ho very maina fotsiny izany fanamboarana izany. Dibo-drano ny toerana iva, rakotra ny lemaky Sahalombo sy Iandratsay noho ny fiakaran’ireto renirano roa : marovoalavo sy sahalombo ireto. Nahagaga ny olona kosa ny fisafosafon’ny rano eo Ambohimiandrisoa raha vao manompo maizina ny andro ; feno ny lalan-drano amin’ny sisin-dalana ka mangeniheny ambony arabe mihitsy ny rano rehefa alina. Voatery mamoritra sy mampiakatra pataloha ny mpandeha an-tongotra ; difotra ny antsasa-kodiaran’ny bisikileta ary misy ny fiara no miverin-dalana noho ny fatahoran’ny mpamily hiroboka ka aleony mitady lalan-kafa. Maha jambena ny fifamoivoizana tokoa ny orana aterak’ilay andro ratsy any andrefan’ny morontsirak’i Morondava, soa ihany fa mitandrina ny tsirairay ka mbola tsisy aloha ny loza hatreto, na dia malama sy ratsy aza ny araben’Antsirabe. Sarotra rahateo ihany koa ny ahitana fomba hanesorana sy handritana ireo rano mitoby eran’ny tanàna, manginy fotsiny ny loto miparitaka sy aretina aterany. Araka ny fanambarana azo avy amin’ny mpamantatra manokana ny toetrandro moa, dia haharitra hatramin’ny Asabotsy izao ny fiavian’ny orana manerana ny faritra maromaro, indrindra fa ny faritr’i Melaky sy Menabe izay tena akaiky ny toerana misy ity andro ratsy ity. Malefaka ny rivotra miaraka aminy ary mbola tsy nivadika rivo-doza, kanefa aleo misoroka toy izay mitsabo satria etsy an-kilany, ahiana ny fihotsahan’ny tany sy ny lalana ; etsy an-daniny koa, mananontanona ny tondradrano hanimba ny vary.
Midio amin’ny rano maloto
Misy tombony ho an’ny olona sasany ihany ny ranon’orana ary tsy avela ho very fotsiny fa araraotina izany, satria « manala fahasahiranana, mba tsy mividy rano eny amin’ny paompy aloha » hoy ity lehilahy iray eo am-panasàna tongotra amin’ny ranon-driaka an-tsisin-dalana. Izao indrindra no vanim-potoana mampihanaka ny valan’aretina mampaharary kibo sy loha, ny zaza no ankamaroan’ny lasibatr’ireo aretin-kibo sy loha ireo, izay tsy inona fa avy amin’ny filalaovana rano maloto. Ny ranon’ny JIRAMA ve no lafo sa fahiarana no antony hidiovana amin’ny rano tsy azo antoka ? Fanentanana ombieny ombieny ataon’ny BNGRC ny famanàna sy ny fisotroana rano madio mandritra ny rivo-doza na ny andro ratsy toy izao, fa asa goavana izany ho an’ny sasany. Misy atodin’ny moka ihany koa ireny rano mihandrona ireny ka raha vantany vao mitsabaka isika, dia mety hifindran’ny tazomoka amin’ny alalan’ny fidiran’ny mikiraoba eny amin’ny masonkoditra. Fampijaliana tena fotsiny raha vokatry ny tsy fitandremana tamina zavatra bitika, tsy sarotra akory no hidirana hôpitaly mandritra ny firy andro ka andaniana vola aman-karena. Efa tsy fidiny ny hain-tany toy ny any Androy, ka tsy maintsy misotro rano ny mponina na dia maloto aza izany, maika ve fa ny aty amin’ny be rano madio, dia hisafidy ny maloto. Mila ampitomboina angamba ny fangatahana fanampiana amin’ny UNICEF sy ny PNUD hanatsarana ny rano fisotro madio eto an-toerana. Tsy voara-maso sy tsy ampy fikojakojana manko ireny paompy ireny ka efa simba daholo ny ankabeazany ; hetahetan’ny vahoakan’Antsirabe mivantana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ihany koa izay famerenana amin’ny laoniny ny rano fisotro madio izay.
Fantatra fa antsoina hoe tananan’ny rano na ville des eaux i Antsirabe noho ireo ranovisy misy eto amin’ny (sources d’eaux thermales) ary koaireo farihy manodidina azy tahaka an’andraikiba izany. Fa ity ranon’orana milahandivotra ity kosa dia nateraky ny tsy fikojakojana ny tambazotra ny lakan-drano fivarianan’ny rano aloto sy ranon’orana. Mba saino sy diniho ihany e.